मनोरेलका लागि काठमाडौंका कुन-कुन स्थानमा हुदै छ सम्भाव्यता अध्ययन ? – Nepal News
मनोरेलका लागि काठमाडौंका कुन-कुन स्थानमा हुदै छ सम्भाव्यता अध्ययन ?
काठमाडौं, जेठ १२ । राजधानीका तीन स्थानमा मोनोरेल निर्माण गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन शुरू भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअनुसार तीन स्थानबाट रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन शुरू भएको हो।
रिङरोडका लागि चाइना रेल्वे कम्पनी (सीआरसीसी भन्ने चाइनाको कम्पनी) महानगरपालिकाभित्र बग्ने नदी किनारालाई आधार बनाएर चीनकै चाइना रेल्वे सियुयान सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र बिवाइडीका नेपाली प्रतिनिधि साइमेक्सले कलंकीदेखि तीलगंगासम्म मोनोरेल बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।
त्यस्तै रिङरोडमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीले अध्ययन शुरू गरिसकेको छ।
कलंकी–तीलगंगाको कम्पनीले पनि अध्ययन शुरू गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको इकाइको भनाइ छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।